China Translucent chena M104 / Milky chena M102 / Opaque chena M101 fekitori uye vagadziri | Baizan
Translucent chena M104 / Milky chena M102 / Opaque chena M101
Mukaka Muchena Pvb
Baizan ruvara pvb firimu yeakavakirwa laminated girazi.
Baizan inogona kupa yakawanda yemavara firimu yevatengi kusarudza neyakagadzikana uye yakajeka ruvara.
kugadzirwa vhoriyamu> 12000t pagore
Nguva yekuendesa: 5-15 mazuva
Isu tinowanzo kupa matatu mapikicha ekutakura zvinhu kune vatengi.
Mufananidzo usina chinhu
Kutanga, tisati tatuta, tinotora pikicha yemudziyo usina chinhu
Yakazara mudziyo mufananidzo
Ipapo, isu tinoshandisa forklift kurongedza mudziyo. Kuitira kudzikisa mutengo wekufambisa, tinofanirwa kuronga zvinhu nenzira inonzwisisika kuitira kuti nzvimbo yemudziyo ishandiswe zvizere. Izvi zvinotevera zvigadzirwa zveakasiyana maratidziro uye huwandu hwakawanda hwe20GP mudziyo.
Tsananguro mhando uye Container chinzvimbo
ukobvu （mm） upamhi (mm) kureba (m / 卷) 20'container (㎡)
Mudziyo wemukati mudziyo
Chekupedzisira, isu tinopa iyo yemusuwo pikicha pikicha, iine ruzivo rwakasiyana senge senhamba yemidziyo etc.
Iyo nzira yekufambisa
Iko kune kazhinji nzira nhatu dzekufambisa dzaunogona kusarudza
Vazhinji vatengi kazhinji vanosarudza kutakurwa kwegungwa. Kufambisa kwegungwa kune zvakanakira hukuru hwakakura uye mutengo wakaderera.
Zvichienderana nedaro kune mutengi, iyo nguva yekutakura iri kubva ku1 vhiki kusvika kumwedzi miviri
2. njanji yekufambisa
Ku nyika dzakavakidzana, tinogona kushandisa njanji kutakura
Inofananidzwa nekutakura kwegungwa uye njanji yekufambisa, ine zvayakanakira zvekumhanya, uye kwete pasi pezvirambidzo zvemamiriro epasi. Kana mutengi aine odha yekukurumidza, tinogona kusarudza kutakura nendege.
Pashure: yakajeka green GN101 / Vridis GN108
Zvadaro: Pakati pepepuru BK104 / Medium brown BK103
Tsvuku R101 / Rose tsvuku R108